पैसाको घमण्ड नगर– ‘कात्रोमा अझैसम्म कसैले गोजी बनाएको छैन’ - Mechikali News
लाग्छ जिन्दगीले आजसम्म खसेका मेरा आसुका थोपा एक एक गरेर गनिदिने हो भने सायद महासागर नै बन्थ्यो होला । मैले गरेका अनेकौं संघर्षका झालहरु बटुल्दै जान्थ्यो भने पीडा, तर्कना, चोट र चित्कारका पिण्डहरु एक एक गरेर पल्ट्याईदिदो हो त एउटा भिषण पहिरो नै बन्थ्योहोला । मेरा करुणाका क्रन्धित आवाजको गति नाप्ने यन्र भैदिएको भए सांच्चिकै कति मापन हुन्थ्योहोला । हररात हरपल पैसै पैसा भनेर भनेर तड्पेका प्रहरहरु खोतलेर चिना टिपन लेखाउनै दिएको भए मेरा भाग्यका रेखाहरु कति घट्बढ भएहोला । गोधुलिमा रोईरहने र कराईरहने झ्याउकिरीले पनि आजभोली मलाई छोडेको छ ।
आसुले भिजेका परेली सुकाउन दन्काईरहेको मनको आगो जिन्दगी नै ओझेलमा परेपछी अझै ओभाउन सकेका छैनन् । मुसलधारे वर्षातमा चिरा चिरा परेको पहाड जस्तै छाती अझै फाटिरहेको छ । मनमा गएको पहिरो र आशाको बाढीले मेरा सबै रहर र चाहाना बगाईदिएको छ । पैसा कमाउन नसकेर बेरोजगार बन्दा गाउँ समाजको त कुरै नगरौ आफ्नै घरपरिवार र आफन्त बाट पनि एक्लो भैदो रहेछ । जति सपना बुनेपनी च्यातिदारहेछन । जति माया बाँड्न खोजेपनी असफल भैदोरहेछ । सधै अरुको उदाहरण दिएर आफुलाई तुलना गर्दा र पैसा कमाउन नसकेर अरुले तोरीलाउरे भन्दा अनि जिवनभर परिवार, आफन्त र समाजको लागि कदापी अबिचलित नभैइकन अबिछिन्न रुपमा अनवरत प्यारका छालहरु अविरल बगाईरहँदा पनि तगारो आफै बनिदोरहेछ ।
त्यही भएर नै आजभोली जिन्दगी सँग मेरो गुनासो छ । ए जिन्दगी ? मेरो चाहाना अनि भावना र सपनासँग कति लडिबुडी खेलिरहन्छस् । म पनि मान्छे हुँ यार किन खेलौना बनाईरहेको छस । आखिर म बाट फाईदा लुटेर छोडिस हैन ? मैले जुन भरोसा तँ माथी गरेको थिएँ आज त्यही यस्तो नमज्जाले पछारिदिईस हैन ? आज मेरा आँखा खोलिदिएको छस कहिल्य नचिम्लिने गरि तलाई धन्यवाद । जसले तलाई छोटो समयमा नै रंगिन बनायो अनि हरेक पल खुशी दियो आज याद मात्र बल्झाउने गरि चिन्ताको भुमरीमा घचटेर गईस । यहाँ त रात होइन सपना बदलिदा रहेछन, गन्तव्य होइन बाटो बदलिदो रहेछ, यत्ती त याद राख ए जिन्दगी !
मेरो भाग्य बदलिएला या नबदलिएला अपसोच समय अवश्य बदलिने छ कुनैदिन । म त आजभोली जिन्दगीको त्यही यात्रामा छु जहाँ यात्रा गर्दा मेरा पैताला चिरिएर वा खुट्टा दुखेर केही फरक पर्दैनथ्यो तर दिल दुखेपछी केही लाग्दो रहेनछ । मलाई मेरो जिन्दगीले यहि पाठ सिकायो म खुल्ला किताब रहेछु हेर्नेहरुले सबै बिषयवस्तु हेरेपछी कुल्चेर गए ।
मेरो जिन्दगी आज त्यही चन्द्रमा जस्तै बन्यो जस्ले शान्त बनेर शितका थोपा झा¥यो, अँध्यारो रातलाई उज्यालो बनायो तर उ सधै एक्लो बनिरहेको छ । जब सम्बन्ध नया हुन्छ मान्छेहरु कुरा खोतल्न बाहाना खोज्दारहेछन अनि जब सम्बन्ध पुरानो हुँदै जान्छ टाढा हुने बाहाना खोज्दारहेछन । सबै खेल आफ्नै मनको रहेछ मनले माने हार हुदोरहेछ अनि त्यही मनले चाहे आधार भेटिदोरहेछ जित हुदोरहेछ । तर कसैको पाउ मोलेर सफल हुनुभन्दा आफैले अठोट गरेर केही बन्ने कोसिस गर्दा पनि तगारो आखिर मान्छे नै बन्दोरहेछ ।
गरीबको कोखमा जन्मनु म जस्तै धेरैको नियती हो । एकदमै गरीब परिवारमा म होइन मलाई जन्माउने मेरी आमाले छुट्याएको समय रहेछ । आमाले उपहार स्वरुप मेरो जन्मको लागि प्रसबको पुडा लुकाएको त्यो समय आज कसैले ममता र माया के हो भनेर कसैले सोध्यो भने म जिल्ल पर्छु ।
जिवनमा कसैको माया ममता नमिस्सिएपछी दाना नलागेको थोते मकै जस्तै जिन्दगी अज्ञानताको डिलमा उभिएर टुलुटुलु हेरि बसेको छु अनि एकतमासले भुईमा हेर्दै खुट्टाको बुढी औलाले माटो कोट्ट्याउदै रुदै गरेको छु । जिन्दगी यस्तो चिज रहेछ जसलाई थुम्थुमाउने, फकाउने फुलाउने कोहि नभएपछी रुनु के का लागि जस्तै लाग्छ अचेल ।
बिरलोले मुसो ड्वाके झै गरि कसैले खाँदै गरेको भाऊमा कुकुरले ¥याल चुहाउदै जुठ्याल्नामा फ्याँकेका भातका सिताहरुमा जिब्रो लतारे झै घुटुक्क थुक निलेर शान्त बन्नुपरेको छ । आखिर जिन्दगी के रहेछ यहाँ मान्छेहरु सेवाका लागि नभैइ स्वार्थका लागि सम्बन्ध जोड्दा रहेछन । अझै घमण्ड के का लागि गर्छौ पैसाको ? याद गर पैसा जति कमाएपनी आखिर मर्दा बेरिने कात्रोमा अझैसम्म गोजी कसैले बनाएको छैन । जदौ ।।।
जैमिनी–१० राङ्खानी, बागलुङ ।